के हुन्छ योनि चाट्दा ? मुखमैथुन गर्नु ठिक कि बेठिक? जानिराखौ – PathivaraOnline
Home > याैनशिक्षा > के हुन्छ योनि चाट्दा ? मुखमैथुन गर्नु ठिक कि बेठिक? जानिराखौ
Bishal May 18, 2022 May 20, 2022 याैनशिक्षा 0
योनि चाट्नु ठीक कि बेठीक ?
प्रश्न- प्रिय करुणाजी, मेरो विवाह भएको ११ बर्ष भयो । करिब १० वर्ष हामीले सामान्य आसनमा यौन क्रिया गरिरह्यौं । सायद त्यही कारण हुन सक्छ, हामी यौनमा बिस्तारै निरस हुन थालेका थियौं । साथी भाइसँग कुरा गर्दा यौन क्रियालाई रसिलो बनाउन ओरल सेक्स महत्वपूर्ण भएको बताए ।
सुरुमा हामी दुबैलाई अलि असजिलो अनुभव भए पनि यसले मलाई नयाँ किसिमको आनन्द दिलायो । श्रीमती पनि आजकाल सेक्सको यस बिधिमा रमाएकी छन् भन्दा हुन्छ । ओरल सेक्सले स्वास्थ्यमा असर त पार्दैन ? कृपया यसका सकारात्मक, नकारात्मक पक्षहरुको जानकारी पाउ“m ।
?***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला *****
जवाफः मुख मैथुनमा सरसफाइको बिषेश महत्व हुन्छ ।
मानव जीवनलाई सहज रुपमा अघि बढाउन दम्पक्तिबीच यौनसम्बन्धको ठूलो महत्व छ । यौन सम्बन्ध युवा अवस्थामा मात्र हुन्छ भन्ने जरुरी छैन, पाका व्यक्तिहरु पनि यसबाट आनन्दित हुन्छन् ।
यौनलाई बढि सरल र सहज बनाउने अनेक बिधि छन् । समय समयमा बिधि बदल्दा यसले थप आनन्दित बनाउँछ ।
ती बिधिमध्ये कै एक हो-ओरल सेक्स पनि *****
यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला *****
हुन त यो विधि प्राकृतिक रुपमा पशु र कतिपय पंक्षीको पनि हो । मुख मैथुन गर्न नदिँदा पशुमा यौन रुची घटेको अध्ययनले देखाएको थियो । अर्थात्, पशुहरुले मुख मैथुनबाट चरम सन्तुष्टि लिन्छन् । यो अध्ययन सार्वजनिक भएपछि पश्चिमा देशहरुमा मुख मैथुन गर्ने मानिसको संख्या हृवात्त बढ्यो ।
प्रोनोग्राफी -ब्लुफिल्म)ले त्यसलाई ब्यापक बन्न सघायो । यद्यपी, मानिसले मध्ययुगदेखि नै मुख मैथुन गर्न थालेको मानिन्छ । सभ्रान्तहरुले दास वा दासीलाई मुख मैथुन गराएको इतिहासमा पाइन्छ । यसले दुबै पक्षलाई चरम आनन्द दिने अध्ययनहरुले देखाएका छन् । अहिले त ओरल सेक्स शिक्षित दम्पत्तीहरुका वीच सामान्य जस्तै बन्न थालेको छ ।
हिजोआज बढी यौन आनन्दका लागि मुख मैथुन गरिन्छ । सुरुमा पुरुषले महिला वा महिलाले पुुरुषको यौनांगलाई मुखले चलाइदिने बिधिलाई ओरल सेक्स भनिन्थ्यो । आजभोलि यो यौन सम्पर्क अघिको पाकक्रीडा (फोरप्ले) बन्न पुगेको छ । यसमा मुखमा स्खलन गराउनेसम्म गरिन्छ । यसलाई गर्भधारण रोक्ने बिधिको रुपमा पनि लिइएको छ ।
अध्ययनहरुले मुख मैथुनले महिलाहरुलाई मनोरोगबाट बच्न मद्दत गरेको देखाएको छ । नेपालमा भने यस किसिमको अध्ययन नभएकाले यौन सम्पर्कको यो बिधि कति लोकपि्रय छ भन्न सकिने अवस्था छैन । नेपाली समाजमा अहिले पनि यो बिधिलाई अप्राकृतिक मान्ने गरिन्छ ।
मुख मैथुनमा सरसफाइको बिषेश महत्व हुन्छ । पश्चिमाहरु यौन सम्पर्कअघि अनिवार्यरुपमा नुहाउँछन् । नुहाउँदा यौन अङ्ग र भित्री बस्त्रहरुको सफाइमा निकै ध्यान दिन्छन् । नेपाल लगायतका कम बिकसित मुलुकहरुमा भने यौनको सन्दर्भमा सरसफाईलाई त्यति महत्व दिइदैन ।
तर, मुख मैथुनको लागि यौनांग, मुख आदिको सरसफाइ महत्वपूर्ण हुन्छ । आफ्नो यौनसाथीको यौनाङ्गको सफाइप्रति विश्वस्त नभएसम्म आनन्द अनुभव गर्न सकिदैन ।
धर्म शास्त्रका अनुसरा हरेक व्यक्तिमा फरक-फरक भगवानको अंश हुनेगर्छ। भगवानको आस्थामाथि कसैले पनि नकार्न सक्दैन। यी र यस्ता कुराहरु धार्मिक ग्रन्थमा उल्लेखित रहेका छन्। अझ धार्मिक ग्रन्थलाई आधार मान्ने हो भने भगवानको उचित आराधनापछि भगवानको आशिर्वाद मिल्ने गर्छ।